(L) အမေရိကန်ဆေးစွဲသောဆေး - စွဲလမ်းမှု၏အဓိပ္ပါယ်သစ် (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း: စွဲ (သြဂုတ်လ, 2011) ၏နယူးအဓိပ္ပာယ်
စွဲလမ်းဆေးပညာအဘို့ (L) ကိုအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း: စွဲ၏နယူးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် (2011)
မှတ်ချက်များဤစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်အစားအစာ၊ လောင်းကစားနှင့်လိင်စသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများပါဝင်သည်ကိုသတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ In ASAM ရဲ့ပိုရှည်တဲ့ဗားရှင်းequivocally, သူတို့ကအသေးစိတ်စှဲ၏သဘောသဘာဝများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုမတည်ရှိကြောင်းဖော်ပြနှင့်အလားတူယန္တရားများနှင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းပါဝငျသညျ။ လိင်စွဲရှိကွောငျးဖျောပွအပြင်, ဒေါက်တာနိုရာ Volkow porn အသုံးပြုသူများအကျိုးစီးပွားနှစ်ခုကအခြားအချက်များစေသည်:
အဆိုပါ ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်မူဝါဒကြေညာချက်မှ Link ကို: အမေရိကန်ဆေးစွဲလမ်းမှုဆေးစွဲ - အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် - ရှည်လျားသောဘာသာပြန်ကျမ်း
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် ASAM ၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများနဲ့လင့်ခ်လုပ်ပါ။ ASAM ၏စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် - မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
အသစ်သောအဓိပ်ပါယျပျေါတှငျ ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှ Link ကို: ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲကြမယ်,. စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း DSM သဘောမတူရန်သဘောတူ
သင်က Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါသလား? ASAM ကိုမေးပါ။ porn အသုံးပြုသူများသည်ကချိတ်ဆက်ခံရဖို့နဲ့တူရဲ့အဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်
သြဂုတ်လ 14, 2011 - LAURAN NEERGAARD, AP ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာအားဖြင့်
၀ ါရှင်တန် (AP) - စွဲလမ်းမှုသည်စွမ်းအားပါဝါမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်နာတာရှည် ဦး နှောက်ရောဂါဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်ကမိသားစုများနှင့်သူတို့၏ဆရာဝန်များအားကုသရာတွင်ကြုံတွေ့ရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီပေးသည်ဟုဆိုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်သေစာ၊ လောင်းကစားနှင့်မစားရသောအစားအစာများပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေအမှန်ပင်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီလိုနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သောအခြားနာတာရှည်အခြေအနေများကဲ့သို့ပင်စွဲကုသနှင့် relapse တားဆီးရေရှည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်အဆိုပါအထူးကုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
စွဲလမ်းမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများအားဖြင့်ဖော်ပြသည်။ အမြင့်ဆုံး၊ အဓိပ္ပါယ်အသစ်သည်ထိုရောဂါလက္ခဏာများအပေါ် အခြေခံ၍ ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်စံလမ်းညွှန်နှင့်သဘောမတူပါ။
သို့သော်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာကစွဲလမ်းမှုသည် ဦး နှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သို့အပိုင်စီးသည်၊ ထိုအပြုအမူများကအဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်အလွန်ခဲယဉ်းနိုင်ကြောင်းရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေသောလူ့အဖွဲ့အစည်း၏မူဝါဒထုတ်ပြန်ချက်သည်ထိုတွေ့ရှိချက်များကိုမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်များနှင့်ပြည်သူလူထုသို့ဘာသာပြန်ဆိုရန်ကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လမ်းကြောင်းအသစ်မဟုတ်ပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးဒါရိုက်တာ Dr. Nora Volkow က“ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemနာက ဦး နှောက်ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်
သူမအနေဖြင့်မူလကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူသောဆရာဝန်များအားဆေးစွဲနေသည့်လက္ခဏာများအတွက်၎င်းတို့၏လူနာများကိုစစ်ဆေးရန်လှုံ့ဆော်ရန်သူကိုယ်တိုင်၏အေဂျင်စီ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုကူညီရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသူမကကြိုဆိုခဲ့သည်။ NIDA ၏ခန့်မှန်းချက်အရအမေရိကန် ၂၃ သန်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ကုသမှုလိုအပ်သော်လည်း ၂ သန်းခန့်သာထိုအကူအညီကိုရနိုင်သည်။
ဦး နှောက်တွေ့ရှိချက်များကိုသနားခြင်းကရုဏာစိတ်များထပ်မံထည့်သွင်းရန် NIDA သည်ယူဂျင်းအိုနေးလ်၏“ ရှည်လျားသောနေ့ခရီးသို့ည” ၏ဖတ်ရှုမှုများကိုမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်များသည်စွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုလေ့လာသည့်အစည်းအဝေးများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ မင်းမှာမိသားစု ၀ င်တွေရှိတယ်၊ အိုကေ၊ မင်းက detox အစီအစဉ်ကိုလုပ်တယ်၊ မင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာဘယ်လိုလဲ” လို့သူမကပြောပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသင်မသောက်တော့သည့်နောက်တွင် ဦး နှောက်တွင်းရှိရောဂါဗေဒသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
ဦး နှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သိမြင်မှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၏ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။
အသက်လည်းပါတယ်။ တိုတိုတိုတိုအရှေ့ဘက် cortex ကဘရိတ်ကိုမကျန်းမာစေသည့်အပြုအမူများဖြစ်စေသည်ဟုရှင်းပြသည်။ ဦး နှောက်၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောနေရာများနှင့်ဆက်စပ်နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရင့်ကျက်သောနောက်ဆုံးအာရုံကြောဆိုင်ရာဒေသများအနက်မှဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်စမ်းသပ်ရန်ရွယ်တူချင်းဖိအားကိုခံနိုင်ရန်ခက်ခဲသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ဇီဝဗေဒအရအားနည်းချက်ရှိသော်လည်းသင်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောနာကျင်သည့်ဝန်းကျင်နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်ဟု Volkow မှပြောကြားခဲ့သည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ ဦး နှောက်၏အကျိုးပေးစနစ်သည်စီးကရက်စီးကရက်သို့မဟုတ်သောက်စရာအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းပင်ဖြစ်စေပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများနှင့်ဆက်စပ်သောထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များသို့ဓာတုဗေဒအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အမှန်တကယ်စွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်သောအခါထိုအမှောင့်စနစ်သည် ဦး နှောက်ကိုအမြင့်ဆုံးအထိအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်၌ပင်၎င်းသည်မပျော်နိုင်တော့ပါ။
အဘယ်သူမျှမအမှား Make: လူနာများနေဆဲပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့တစ်ခုစွဲဆက်ဆံဖို့ရွေးချယ်ရမယ်, Miller က Oconomowoc, Wis အတွက်ရော်ဂျာသတိရအောက်မေ့ဆေးရုံမှာဟယ်ရင်တန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးတင်ပြလိုပါသည်။
သို့သော်ပြtheနာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုအချို့ကိုနားလည်ခြင်းသည်ဤပြissuesနာအချို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှက်ဖွယ်ရာအချို့ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအမည်းစက်ကိုလျှော့ချမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာအများစုသည်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အာရုံပြုနေသော်လည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကလောင်းကစား၊ လိင်နှင့်အစားအစာများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။ ဘယ်လောက်မကြာခဏဖြစ်ပျက်ဘယ်လောက်ကောင်းသောဒေတာမရှိပေမယ့်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်အချိန်တန်ပြီဟု Miller မှပြောကြားခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း Volkow ကစွဲစွဲလမ်းလမ်းမြင့်မားမှုကိုခေတ္တပိတ်ဆို့ရုံတင်မကပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ဦး နှောက်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုများပြုလုပ်ရန်ထို ဦး နှောက်တွေ့ရှိချက်များကို အသုံးပြု၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသုတေသနကိုပြုလုပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Tilling Miller's List List: တချို့လူတွေဘာကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူတာကိုတခြားသူတွေထက်ပိုမြန်ပြီးပိုမြန်တာလဲ၊ ပြီးတော့ ဦး နှောက်ကုသမှုကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်း။
အယ်ဒီတာ၏မှတ်ချက် - Lauran Neergaard သည် Associated Press ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြcoversနာများကိုဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ Net က on:
• ASAM ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် http://www.asam.org/DefinitionofAddiction-LongVersion.html
မူပိုင်ခွင့်© 2011 The Associated Press ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။